महन्थ ठाकुरले दायर गरेको सुनवाइ जारी, सर्वाेच्चले जोगाइदेला उनको राजनीति ? Canada Nepal
महन्थ ठाकुरले दायर गरेको सुनवाइ जारी, सर्वाेच्चले जोगाइदेला उनको राजनीति ?
क्यानाडा नेपाल श्रावण १५ २०७८
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आधिकारिकता सम्बन्धमा दायर रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले यही साउन ११ गते जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिइसकेको छ ।
तर, यसअघि नै महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
आयोगले ‘हेड काउन्ट’बाट आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुंग्याउने तयारी गरेपछि यसलाई रोक्न माग गर्दै गर्दै महन्थले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
यदी सर्वाेच्च अदालतले महन्थ पक्षमा फैसला गरेमा उनको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने आम चासो छ । जसपाको आधिकारिकता पाएसँगै यादव समूहले महन्थ समूहमाथि कारबाही गरिसकेको छ ।
श्रावण १५, २०७८ शुक्रवार १२:२६:१५ बजे : प्रकाशित